ई-रातो खबर २०७४, २० कात्तिक सोमबार ०४:३७ November 6, 2017 970 Views
सत्य वर्ग सापेक्ष हुँदैन
आफ्नो पार्टी वा वर्गको विषय भएर मात्र सत्य वा असत्य हुँदैन । सत्य सधैँ सत्य नै हुन्छ । ठूला विद्वान् भनिएका मान्छेहरूले सत्यलाई तोडमरोड गरेका छन् । उनीहरूमा सत्यको विषयमा अज्ञानता छ अथवा नियत सही छैन । उनीहरूले नियतबस सत्यलाई राजनीतिक स्वार्थको विषय बनाएका छन् । जसले सत्य एउटा हुन्छ, अर्कै बोल्छ ।
सामाजिक वा सामूहिक उत्पादन र व्यक्तिगत वा निजी स्वामित्व अथवा वितरण प्रणाली नै समस्या हो । मानवीय विविधता र निजत्वको सम्मानसहित सामूहिकता भएपछि मात्र समस्याहरूको समाधान सम्भव छ । निजी स्वामित्व सम्बन्धबाट पैदा हुने समस्याबाट सञ्चार क्षेत्र पनि प्रभावित छ ।
अहिलेको व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र भनिएको छ । लोकतन्त्रमा विपक्षी विचार र राजनीतिको कुरा पनि बाहिर जान दिनुपर्‍यो । संसद्को प्रतिपक्षी मात्रै विपक्षी होइन । त्यो त पूरक वा एउटै पक्ष हो । यहाँ फरक विचारलाई जनतासम्म पुग्न दिइन्न । बल प्रयोग गरेर विचार प्रवाह हुनबाट रोकिन्छ । ‘सिन्डिकेट’ लगाएर रोकिन्छ । यो त लोकतन्त्र भएन, संसदीय निरंकुशता भयो । पत्रकारितालाई समाजको ऐना भनिन्छ । नेपालको सञ्चार यथार्थको ऐन बनेको छ त ? यो सत्य छोप्ने पर्दा त बनेको छैन ? सत्य छान्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्‍यो । खराबमध्येको एउटा खराब छान्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । सञ्चार माध्यमले त्यस विषयमा पहल लिन आवश्यक छ । सञ्चारलाई आवाजविहीनको आवाज भनिन्छ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । त्यो काम गर्ने सञ्चार मध्यम चाहिएको छ । त्यसैले सञ्चारले नयाँ भूमिका पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपाली सञ्चार शासक वर्गको वरिपरि घुमिरहेको छ
अध्यक्ष, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपाल
नेपाली सञ्चार माध्यम शासकवर्गको वरिपरि घुमिरहेको छ । त्यो जनताको आवाज बन्न सकेको छैन । विज्ञापन सहजीकरणको लागि भारतीय नागरिकलाई नियुक्त गर्ने गरिएको छ । त्यसले राष्ट्रिय स्वार्थमा नै धक्का लाग्ने अवस्था छ । मालिकको स्वार्थअनुसार प्रबन्ध सम्पादक हुन्छन् । लाभका लागि विषय छनोट हुन्छ । सम्पादकअनुसार विषयको छनोट हुँदैन ।
बिहानको सञ्चारको समाचार हेरेर दिउँसो नेताहरू बोल्ने गर्छन् । त्यसैले सञ्चारको महत्व निकै बढेको छ । सञ्चारमा पाठक, श्रोता, जनतको सरोकार आउँदैन । सचेत पाठकको पनि अभाव छ ।
संसदीय दलहरू र माओवादीबीचको १२ बुँदे सहमतिले भारतलाई हस्तक्षेप गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गर्‍यो । किरण, गौरवको गिरफ्तारी सायद १२ बुँदेका लागि अवरोध भएका कारण गरिएको थियो । १२ बुँदे सहमतिमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाहिरबाट निर्णय गर्न सक्ने कारण निहित छ । विदेशीको उपहारका रूपमा गणतन्त्र आएको छ । जङ्गे खम्बा ढुङ्गामा हेरेर मात्र हुँदैन ।
नेपाली सञ्चार हाटबजार जस्तो छ
– बोर्णबहादुर कार्की
निवर्तमान अध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल नेपाल
संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९४८ मा भएको सम्मेलनमा सञ्चार माध्यम स्वतन्त्र हुनुपर्ने–राख्नुपर्ने वकालत गरिएको थियो तर पछि नियन्त्रणकारी शर्तहरू आए । नियन्त्रण र बन्देजरहित सञ्चार विश्वमा कहीं पनि छैन । संचार स्वतन्त्रताको प्रतिवद्धता गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०४७) ले पत्रकर तथा कवि कृष्ण सेनको हत्या गर्‍यो । स्रोत : रातोखबर साप्ताहिक
२०७४ कात्तिक २० गते विहान १०ः२० मा प्रकाशित
२०७४ कात्तिक १५ पूर्णााङ्क ११५